Muuri News Network » Adeeg ka Farxiyay Qurba-joogta oo Muqdisho looga dhawaaqay..
Adeeg ka Farxiyay Qurba-joogta oo Muqdisho looga dhawaaqay..
Oct 9, 2015 - Comments off
Ka dib shir jiraa’id uu maanta Muqdisho ku qabtay madaxa Operation-ka Premier Banki,ayuu ku faah faahiyay adeeg cusub oo loogu talagalay qurba joogta Soomaaliyeed.
Mudane C/risaaq Max’ed Axmed oo maanta saxaafada kula hadlay xarunta dhexe Bakiga oo ku taalo magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Bankiga Premier uu daah furay adeegyo Banki oo u gooni ah qurba-joogta Soomaaliyeed.
Adeegyadaan oo hada laga bilaabay dalalka Mareynkanka,Kenya iyo Ingiriiska laguna baahi doono dalal kale dhawaan ayaa u ogolaanaya Soomaalida ku nool dalalkaasi iney helaan adeegyo Banki oo isku xiraya dalka iyo dibada.
Adeegayada Bankiga ee qurba joogta ee Bankiga maanta daah furay ayaa ka kooban xirmo adeeg ah oo isugu jira:
1.Xisaab socota (Current account).Adeega MasterCard debit oo macmiilku Xisaabtiisa lacag kagala bixi karo meel kasta oo uu aduunka ka joogo.
Adeega Swift-ga oo sahlaya in macmiilka qurba joogta ah lacag ku soo tirsan karo kana dirsan karo Xisaabtiisa ka firan Premier Baki.
Adeeg bixinta biilasha oo macaamiisha qurbaha u ogolaanaya iney si si sahlan u bixiyaan biilasha oo ay u soo diraan Soomaaliya iyaga oo adeegsanaya Xisaabaadka ay ku leeyihiin Premier Bank.
Iyo maalgelinta qurba-joogta oo ka kooban xirmada maal-gelinta ganacsiga iyo xirmada maal-gelinta guryaha iyo Hantida ma-guurtada ah.
Bankiga caalamiga ee Premier ayaa adeegyadaan kala kaashan doona Wakiilo Bankigu si sharci ah ugala heshiiyay hubinta iyo soo gudbinta document-yada macaamiisha xisaabaadka loo furayo ee ku sugan dalalka adeegan loo diyaariyay ee Mareynkanka,Ingiriiska iyo Kenya .
Dhanka kale,Bankiga ayaa balan qaaday adeegyo kale oo dhawaan la soo bandhigi doono